आखिर के हुँदैछ नेकपाको बाँकी एकता ?::Hamrodamak.com
आखिर के हुँदैछ नेकपाको बाँकी एकता ?
दुई सदस्यीय कार्यदलले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको बताएता पनि पछिल्लो समय विकशित घटनाक्रमका कारण त्यस्तो सम्भाबन देखिंदैन ।
काठमाडौंँ। दुई पार्टी एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बाँकी एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन कार्यदल गठन गरिसकिएको छ। गृहकार्यका लागि गठित दुई सदस्यीय कार्यदलले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको बताएता पनि पछिल्लो समय विकशित घटनाक्रमका कारण त्यस्तो सम्भाबन देखिंदैन ।
सचिवालय बैठकले कात्तिक ८ गते दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई प्रदेश कमिटीको सदस्य सङख्या, केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारी तथा पार्टीको तल्लो स्तरसम्मको एकता प्रक्रियाका लागि गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले गृहकार्य गरी तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यदलले गृहकार्यलाई अन्तिम रुप दिइनसकेकाले सचिवालय बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
यसअघि कात्तिक १२ र १३ गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थता र कार्यदलको तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो । स्थायी कमिटी बैठक सार्ने निर्णयमाथि नेताहरुको नै असहमति रहेको थियो। एकताको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पार्टीको एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदा पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरुबीच नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुन् थालेको छ ।
पछिल्लो समय पार्टी एकतालाई एकता प्रक्रिया समयमै सम्पन्न नहुँदा सरकारको कामकाज समेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको काम कारवाहीसँग समेत तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ ।
पार्टी भित्रकै कतिपय कारणले कार्यदलले गृहकार्य गरी प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्दा यही कात्तिक ८ गतेपछि सचिवालय बैठक समेत बस्न सकेको छैन । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अनुमोदन गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गराउने तयारी गरिएको छ ।